Xiisad xoogan oo ka dhalatay xil ka qaadista CABDIQANI SACIID CARAB | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Xiisad xoogan oo ka dhalatay xil ka qaadista CABDIQANI SACIID CARAB
Muqdisho (Dalkaan.com) – Guddoomiyeyaasha 14 Naadi ayaa si adag uga horyimid xil ka qaadista lagu sameeyay Guddoomiyihii Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Cagta Cabdiqani Siciid Carab.
Guddoomiyeyaasha ayaa tallaabadaas ku tilmaamay “mid sharci darro ah oo fowdo ku ah hanaanka iyo dastuurka u degsan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed”.
“Qeyb kamid ah guddiga fulinta ayaa waxay sii daayeen war-saxaafadeed ay ku sheegen in guddoomiyaha xilka ka qaadeen, taasi oo meel ku dhac ku ah dastuurka, waana arrin fowdo ah oo aan laga fiirsan,” ayaa lagu yiri qoraal si wada-jir ah u soo saareen guddoomiyeyaashaas.
“Waxaa halkan ka cadeynaynaa in kooxaha ama shirweynaha ay doortan guddiga fulinta, mana jirto cid ka mid ah guddiga fulinta oo shaqo joojin ku sameyn karta guddoomiyaha, taasi waa awooda shirweynaha oo keli ah.”
Barcelona oo la xiriirtay wakiilka Franck Kessie.
Daawo: Xasan Sheekh oo dalab culus soo saaray kadib dilkii xildhibaan...
Deg deg Cawaaqib Xumada Ka dhalan doonta Boobka Doorashada uu Wado...
SH. SAID RAGEAH GUURKA AJNABIGA IYO FURIINKA FARAHA BADAN EE SOOMAALIDA